AMISOM oo soo dhoweyneysaa go'aanka hogaamiyaasha #Somalia, #Kenya, iyo #Ethiopia si loo baaro dhacdada. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA AMISOM oo soo dhoweyneysaa go’aanka hogaamiyaasha #Somalia, #Kenya, iyo #Ethiopia si loo...
AMISOM oo soo dhoweyneysaa go’aanka hogaamiyaasha #Somalia, #Kenya, iyo #Ethiopia si loo baaro dhacdada.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa qoysaska dadkii ku dhintay shilkii diyaaradda 4tii Maajo, 2020. Diyaaradda ka tagtay #Baidoa, waxay saarnaayeen lix qof waxayna kusii dhowaadeen #Bardale, koonfurta ee Soomaaliya iyo 300km waqooyi-galbeed caasimada Muqdisho markii ay burburtay.
Howlgalka ayaa soo dhoweynaya go’aanka ay gaareen hoggaamiyeyaasha Soomaaliya, Kenya, iyo Itoobiya ee ku saabsan baaritaanka shilka.
Madaxa howlgalka AMISOM, Danjire Francisco Madeira, ayaa yiri “Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno wada shaqeynta aan la leenahay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, waxaanan taageeri doonnaa oo aan fududeyn doonnaa baaritaannada looga golleeyahay in lagu caddeeyo duruufaha ku xeeran dhacdadaas”.
Kenya iyo Itoobiya ayaa ah Wadamada Ciidamada ugu deeqaya Ciidamada (TCCs), kuwaas oo loo diro Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. AMISOM waxay sanado badan taageereysay dowlada soomaaliya dadaalkeeda ku aadan soo afjarida dagaalka, nabada iyo horumarka dalka.
Previous articleWarbixntii ugu danbeysay Itoobiya COVID19 Tirada Qabta oo gaadhey 162 qof
Next articleWarbixinta xaaladii ugu danbeysay COVID19 Soomaaliya
Dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland